दिपकराज गिरीले काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुलाई बाँदर भनेपछि – Nepalaya Times
जेठ १७, २०७९ मंगलबार 632
काठमाडौं । चर्चित कलाकार दिपकराज गिरीले काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुलाई बाँदरको संज्ञा दिएका छन् उनले सामाजिक सञ्जालमा वडाध्यक्षहरुलाई बाँदरको संज्ञा दिएका हुन् ।
सोमबार महानगरपालिकाको बैठकमा बालेन साहलाई वडाध्यक्षहरुले प्रक्रिया सिक्नुपर्ने भनेपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहँदा गिरीले बाँदरको संज्ञा दिएका हुन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्ः ‘प्रक्रिया सिकेर आउनु पर्छ सही हो, कुरा एकदम ठिक हो । बाँदरहरु कसरी तह लगाउने त्यो प्रक्रिया त अब सिक्नै पर्छ बालेनजी ।
पोखरा–जोमसोम रुटमा उडान भर्दै आएको तारा एयरका विमान सात वर्षमा दुई ठूला दुर्घट’नामा परे । आइतबार पोखराबाट बिहान ९ः५५ बजे उडेको २२ जना सवार तारा एयरकोे ९ एनएइटी ट्विनअटर जहाज मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ कोबाङस्थित सानुसरेमा दुर्घ’टनामा परेको थियो ।
प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक कठिनाइका कारण जहाज दुर्घट’नामा परेको एक दिनपछि मात्रै हिमालको फेदीको सानुसरेमा जहाज ठो’क्किएर दुर्घट’ना भएको घट’नास्थल पत्ता लागेको थियो ।
दुर्घ’टनामा चालक दलसहित २२ जनाको मृ’त्यु भएको छ । जोमसोम विमानस्थल नपुग्दै कोबाङको सानुसरे डाँडोमा ठो’क्किएर दुर्घट’नामा परेको विमानमा सवार सबैको श’व संकलन गरी काठमाडौं पठाइएको छ ।
तारा एयरको यसअघि २०७२ फागुन १२ गते तारा यएरको ९–एनएएचएच ट्विनअटर विमान म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको सोलीघोप्टे भिरमा दुर्घ’टना भएको थियो । उक्त दुर्घ’टनामा दुई विदेशी नागरिक र चालक दलका तीनसमेत गरी २३ जनाको मृ’त्यु भएको थियो ।
सात वर्षको अवधिमा आइतबार भएको दो’स्रो दुर्घ’टना हो । त्यसैगरी, २०७३ भदौ ३ गते जोमसोमबाट पोखराका लागि उडान भर्न लागेको तारा यएरकै ९–एमईक्यु ट्विनअटर विमान धावनमार्गमा पांग्रा नखुलेपछि कालीगण्डकी नदीमा ख’सेको थियो ।
पोखरा–जोमसोम रुटमा उडान भर्ने विमानले म्याग्दीको घोरेपानीसम्म पोखराको टावर र लेतेमाथिको आकाशदेखि जोमसोमसम्म जोमसोम विमानस्थलको टावरसँग सम्पर्क हुने भए पनि पहाड र हिमालको अवरोधका कारण घोरेपानीदेखि लेतेको आकाशसम्म विमान दुवैतर्फको सम्पर्कबाट विच्छेद हुन्छन् ।
योबीचको दूरी पार गर्न विमानलाई पाँचदेखि छ मिनेट लाग्ने गर्छ । दुवैतर्फको टावरबाट विच्छेद हुने ‘बफर जोन’को यही मार्गमा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमालको बीच भएर विमानले उडान भर्नुपर्छ । रासस
Prevकबड्डी–४’ की नायिकाविरु’द्ध किन यसरी भयो प्रद’र्शन ? (तस्बिरहरु)
Nextबिहेमा नबोलाउँदा बुहारीले गरिन् देवर र ससुराको ह’त्या ! यसरी भयो पर्दाफास
यी हुन् सलमानलाई गो’ली हान्ने सार्पसुटर, जसले सलमानलाई उनकै घर अगाडी घण्टौँ कुरेर बसेका थिए,
८ महिनामा श्रम स्वीकृति लिने साढे ५६ लाख नाघ्यो (कुन देशमा कति ? )
१८ बर्षीया किशोरीलाई प्रहरीले गो’ली हानेर मा’रेपछि बर्दिया त’नावग्रस्त, ९ जना घा’ईते
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर नराखे यस्तो कारबाही गर्ने चेतावनी (कहिले देखी हेर्नुहोस)
यी हुन् तारा एयरको दुर्घ’टनामा परेका २५ वर्षीय ‘को पाइलट उत्सव’ यस्तो छ उनको नालिबेली (4329)
बिहेमा नबोलाउँदा बुहारीले गरिन् देवर र ससुराको ह’त्या ! यसरी भयो पर्दाफास (1231)